Budada budada Manganese, MnB2 - Goodao Technology Co., Ltd.
Waxaa loo isticmaali karaa nooc ka mid ah ka-hortagga oksaydhka, ka-hortagga nabaad-guurka iyo hagaajinta awoodda kuleylka ee boron lagu daro, oo loo isticmaalo warshadaha nukliyeerka, qalabka milatari ee qalabka maaraynta iyo qalabka kale ee cusub
Caanaha molecular MnB2
Lambarka CAS 12228-50-1
Codsiga waxaa loo isticmaali karaa nooc ka mid ah ka-hortagga oksaydhka, ka-hortagga nabaad-guurka iyo hagaajinta awoodda isugeynta ee boron lagu daro, oo loo isticmaalo warshadaha nukliyeerka, warshadaha milatariga qalabka wax lagu qabto iyo qalab kale oo cusub
Magaca Ingiriisiga: Manganese Boride
Daahfurka waxaa sameeyay koox uu hogaaminayo Qiu Guangchun, oo ah borofisar ka tirsan jaamacada aoyama Gakuin ee Sayniska iyo Teknolojiyada. Maaddada superconducting waxay leedahay heer-kul wareejin heer sare ah oo heerkeedu sarreeyo sida Tc = 39K (-234 ℃) marka iska caabbintu u dhacdo eber. Soo-helitaanku wuxuu dib u qoraa diiwaanka waxyaabaha aan-macdanta oksijiin ku-habboonayn ee Tc. Mr Akiko ayaa qabtay shir jaraa'id 26-kii Febraayo 2001 si uu ugu dhawaaqo natiijada daraasada. Tiro ka mid ah hay'adaha cilmi baarista ee Japan iyo dibaddaba "ayaa sidoo kale xaqiijiyay" xaqiiqadan iyada oo loo marayo baaritaanno dheeri ah (Xarunta Caalamiga ah ee Superconducting Machadka Teknolojiyada Warshadaha ee Superconductivity Second Director Director, Suko Tajima et al.). Markay sare u kacdo heerkulka kala iibsiga ee superconducting, ayaa ka sii habboon ee ay tahay in la isticmaalo. Tc ee 39K si gaar ah uma sarreeyo.
Waqtigaan la joogo, bini'aadamku waxay heleen hago-kulule sare oo heer sare ah (HgBa2Ca2Cu3O8) oo leh Tc of 134K (-139 ℃). Soo helitaanka superconductor cusub ayaa soo jiitay dareenka maxaa yeelay wuxuu ka kooban yahay. Waqtiyadii hore, heerkulka jimicsiga ee sarreeya waxaa inta badan lagu gaaraa maaddada oksaydhka. Sababtoo ah naxaas macaanku wuxuu ka tirsan yahay fasalka dhoobada, "way adag tahay in laga baaraandego qaab toosan, sidaa darteed weli lama isticmaalin" (Qiu Guang). Marka la barbardhigo tan, macdanta dib-u-dhiska manganese diboride waxay leedahay faa'iidooyinka soo socda.
(1) Manganese (Mg) iyo boron (B) waa raqiis waana la heli karaa. "Tani waa isku darka ugu fiican ee warshadaynta" (Dayrta).
(2) Maaddaama heerkulka isku-dhafka uu yahay 700 only oo keliya, sidaas darteed qiimaha wax soo saarka iyo wax-soo-saarka ayaa hooseeya.
(3) Waxyaabaha ku-habboon ee ka-sameysan alumiska ay ku jiraan walxaha birta ah ee 'Mg' iyo manganese diboride ma yeeli doono xittaa haddii looga baaraandego gobolka alloy-ka.
(4) Maaddaama ay ka kooban tahay laba walxood oo keliya, way fududahay in lagu soo daro filimaan dhuuban.
Maaddadu waxay ugu dhowdahay shuruudaha SQUID (qalabka faragalinta ku-meelgaarka ah)
Hore: Budada Niobium Boride, B2Nb
Xiga: Molybdenum budada budada, MoB2